GlobalNet | Zoom All Solutions
Global Technology (GlobalNet) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဦးတည်း Zoom Official Partner အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Zoom Solutions Package & Zoom Rooms Product Suite အလုံးစုံကို Official License များဖြင့် One-Stop Service ရရှိနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Zoom Meetings, Zoom Video Webinars အစရှိသည့် License account များအား Zoom Certified Engineers များမှ Zoom Room Set up ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ အပြင် Local Partner တစ်ဦးအနေဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် လွယ်ကူ အဆင်ပြေ နိုင်အောင် Zoom FREE Training များကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
New Normal Life ပုံစံအတိုင်း Online Learning System သို့ ကူးပြောင်းပုံဖော်ရာတွင် များစွာ အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ Zoomကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ကုန်ကျမှု နည်းပါးသော Virtual Classroom များကိုဖန်တီးနိုင်ရန်
Financial ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများအတွက် customer များဖြင့် ပိုမိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုခိုင်မာအောင် တည်ဆောင်နိုင်ရန် Face-to-Face Video Communication စနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်
Zoom for Enterprise Human Resources
Human Resources ဌာနများအတွက် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စေရန် ၊ ဝန်ထမ်း အချင်းချင်း ပိုမိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်သော အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ ရုံးခွဲများ ရှိဝန်ထမ်း များအား Internal Training များပြုလုပ်ပေး နိုင်ရန်
Zoom For Enterprise Solution
Multinational Companies များ, Large Enterprise များ၊ Embassy များ၊ Small & Medium Business များ၊ Associations များ ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ Work From Home ၊ Remote Working ပြုလုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအားလုံး အတွက် Zoom Meetings, Zoom Video Webinars များပြုလုပ်နိုင်ရန်
Healthcare ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများကိုလည်း ဆရာဝန်နှင့် လူနာများအား Bandwidth နည်းနည်းသာလိုအပ်တဲ့ Zoom Video Conferencing ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ကုန်ကျမှုနည်းပါးသော Online Appointmentများ ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်
? Learn More : www.globalnet.com.mm/zoom/
? Email : digitalservices@globalnetmm.com, digitalsales@globalnetmm.com
? Hot Line : 09883080874, +959883080849, 09970758580
How is SD-WAN a...
Now, that we have ...
GlobalNet International IP Peering...
GlobalNet expands more than ...